Abaphumeleleyo kwiiNdalo ezi-7 zeNdalo- iGeofumadas
Abaphumeleleyo be-7 Natural Wonders
NgoNovemba, 2011 Internet kunye neBlogs, Ezahlukeneyo
Njengoko kubhengeziwe, ngomhla we-11/11/11 i-7 ephumeleleyo yendalo yamenyezelwa; Nangona lubizo lwangaphambili kuba ukubalwa okusemthethweni kuya kuthatha iintsuku ezimbalwa, imikhwa kunokwenzeka ukuba ayinakuguqulwa kwaye akukho nto iya kutshintsha. Kule nqaku, ndiyakholelwa izakuba yeyokugqibela kwesi sihloko Ilungele ngaphandle kokufuneka i-oda ephambili, kunoko yenza uhlalutyo oluqukuqelayo kwilizwekazi.
Le nkqubo yaqala ngo-2007 ngamagama angama-440 abatyunjwe ngabantu, asuka kumazwe angama-220 kwihlabathi liphela. Abo bafumene ezona voti zininzi kwaye bebhalwe phantsi ngamazwe abo, bakhethwa abangama-77 kwisilinganiselo se-10: 1 kwaye ekugqibeleni ngaphezulu konyaka odlulileyo abangama-28 bakhethwa kumlinganiselo we-4: 1, kuwo kuphela zi-7 ezaziza kukhethwa.
Kubekho utshintsho oluncinci kwinkqubo ecwangcisiweyo, kulo nyaka uphelileyo obonise umkhondo kunye nokudibanisa ivoti; Ngeli xesha, i-14 yabhengezwa ngokuthambekela okukhulu.
Ndandisikhuphile isibikezelo sam xa kwakuchazwa abagqwesileyo abangama-28; ye-7 ndikwazile ukubetha i-3: Ndikwazile ukubona ezimbini ukusuka e-Asiya nakwi-Amazon Rainforest yoMzantsi Merika. Kananjalo ezinye zeembono zam zempembelelo yeendawo ezinofikelelo olukhulu kwi-Intanethi zazinenqanaba elithile lempumelelo kunye nokungakhathali kwamazwe aphuhlileyo endathi ngenye imini ndawakhankanya… aphela eshiya iYurophu ne-United States ngaphandle kokuthatha inxaxheba.
Ilizwekazi laseAsia (abaphumeleleyo be-3)
Eli yayilelizwekazi elinenxaxheba ephezulu; ngaphandle kwabaviwa abali-9, ukwazile ukubeka indawo. 3. Ubuchule yayilixesha elihle kakhulu kulo mmandla weplanethi ongaziwa kancinci yi-Hispanics; kananjalo ngumzuzu olungileyo wokunxibelelana owahlala ngaphezulu kwamazwe anjenge China ne India kwaye ekugqibeleni kufuneka sikwamnkele ukuba abaphumeleleyo babini bamele izimangaliso ezifanelekileyo.
IHalong Bay Ifunyanwe eQuáng Ninh, eVietnam, yenza umbono omangalisayo wokwakheka komhlaba, imiqolomba kunye namachibi angaphakathi kwi-1,553 yeekhilomitha zekwere kunye namaqithi e1969.
Umfula ongaphantsi komhlaba wasePuerto Princesa. Le isePalawan, kwiiPhilippines. Ngaphezulu kweekhilomitha ezisibhozo zomlambo onokuhamba ngaphantsi kwentaba, emele ukwenziwa okukhulu kwe-stalactites kunye ne-stalagmites.
Isiqithi seJeju EMzantsi Korea, luhlobo lwentaba-mlilo engama-360 eentaba-mlilo, phakathi kwazo apho isithsaba esenziwe ngumngxuma wolala obizwa ngokuba yiHallasen sigqamile. Ijongeka incinci kodwa ikwi-1950 yeemitha ngaphezulu kolwandle.
Ilizwekazi laseMelika (abaphumelele i-2)
Ukusuka kumagqibela kankqoyi we7 ukwazile ukuxhasa ezimbini, nangona apha eyona nto yayikukuba izindululo zabiwa ngamazwe aliqela e-cone esemaZantsi, kubandakanya neBrazil ehlala umzuzu okhethekileyo kwindlela eya ekubeni negunya kwithuba eliphakathi nendawo apho ukwaziwa kukarhulumente qonda ukuba kuthetha ukuthini ukukhuthaza oko onako ukunciphisa ukusikelwa umda kokubi (okuqheleke ngakumbi).
Kwihlathi laseAmazon. Eli xesha laliqondakala, ngokuyinxenye kuba zizigidi ze-7 zeekhilomitha ezabelana nge-9 amazwe, kubandakanya uninzi lwe-cyber-charisma; Kananjalo kuba luphawu lokwazi kwehlabathi ukuba siphulukana nomzuzu ngamnye.
I-Iguazu Falls. Khange ndibheje kule, ndikholelwa ukuba iColorado canyon izoyiphumelela. Kodwa le arc phantse ye-2 yomgama weekhilomitha zokuwa phakathi kweMisiones (iArgentina) neParaná (iBrazil) ayikho kulonwabo.
I-Oceania (i-1 iphumelele)
Kwaba-7 abagqibe kumjikelo wokugqibela wakwazi ukufumana enye Apha ndaye ndacinga ukuba i-coral reef, kodwa umba osasazwe ngokubanzi yimibutho yokuzincama kule ngingqi.
Ipaki yeKomodo. E-Indonesia, mhlawumbi inamba ivakala ngathi siqhelene nayo, yiyo loo nto le paki yonyuswayo ngo-1980.
Ilizwekazi lase-Afrika (ophumelele i-1)
Ngokutyunjwa nje kabini, waphumelela elinye. Ndilindele i-Kilimanjaro, kodwa uxinzelelo olukhulu lwabasebenzisi eMzantsi Afrika luye lwanefuthe kum, ethi yona ithathwe njengegunya lehlabathi kwixesha eliphakathi.
Intaba yeTafile Ithafa elingaqhelekanga phezu kwentaba eKapa, ​​eMzantsi Afrika. Yaziwa kakuhle ngokukhumbula kwakhona, ukunyuka kunye nokhenketho lwemoto yentambo yenze ukuba idume.
Izwekazi laseYurophu kunye ne-United States akukho ndawo inkulu
Utyekelo lweendawo eziphuhlileyo zomhlaba (e-United States naseYurophu) ngokubhekisele kwimeko yokungakhathali iqinisekiswa yimicimbi abayithathela ingqalelo cheesy; Ngelixa iitropiki kunye namazwe asaphuhlayo ahanjiswa kukuthanda izwe okuzelweyo. Ngokunokwenzeka abo bahambileyo besuka kwezi ndawo, kuyacaca ukuba bazi iiparadesi ezingcono kunalezo zomhlaba wabo, ke baya kuzaphula iintliziyo zabo bavote ngokufanelekileyo. Kodwa ayinakuhoywa into yokuba kule mimandla amanye amajelo eendaba kwasekuqaleni abuza ukurhweba ngephulo, etyeshela ixabiso lehlabathi eliziswa lolu hlobo lomzamo kwinkcubeko nokwazisa ngokukhuselwa kweplanethi; iphikisana neenzame ezinkulu ezenziwa ngala mazwe aphucukileyo ukulwa ubushushu behlabathi.
Ngokuqinisekileyo ngeza kuba neziphumo ezahlukileyo ukuba ibingeyinyathelo lokuqala leZizwe eziManyeneyo, i-National Geographic okanye elinye iziko elinomtsalane ngakumbi kulo mxholo.
Ndikhathazekile njengoko kunjalo e-United States, apho abahlali bothuswa kukubona ukuba mingaphi imithi ye-pine emdaka, kuthathe iminyaka engama-30 ukufikelela kubude kwaye ngonyaka omnye baye bafa ngenxa yokunqongophala komswakama; Xa uyibona ivela emoyeni, uyaqonda ukuba ezo ndawo azintsundu ayisiyokwindla ... baxela nje intlango ekhuselekileyo kwixesha nje elifutshane.
Kodwa ngexesha elifanelekileyo lemimangaliso yendalo ye7.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Umxholo waseDatshi, ukubonakaliswa kweLatin American
Post Next IsiCwangciso soLawulo oluNgxamisekileyo (GEMAS) khetha i-gvSIGOkulandelayo »